Kwingosi yokuxhumana ngobuchwepheshe bekukhona uSolwazi Deevia Bhana, uSolwazi Dipane Hlalele, uSolwazi Jace Pillay noDkt Damien Tomaselli.
IKolishi lezesiNtu lisanda kuba nengosi yokuxhumana ngobuchwepheshe ngesihloko esithi: Helping Children Cope with their Fears about COVID-19.
Usihlalo bekungu-Solwazi Deevia Bhana wase-UKZN kanti ababambiqhaza bekungu-Solwazi Dipane Hlalele wase-UKZN, uSolwazi Jace Pillay wase-University of Johannesburg noDkt Damien Tomaselli wase-Transmedia.
I-COVID-19 isazohlala isikhathi eside, kanjalo nokuyesaba kwethu. Kodwa sizelekelela kanjani izingane zethu ukuthi zibhekane nokwesaba? Zonke izingane, zayo yonke iminyaka futhi zawo wonke amazwe, zithintekile ngukungalingani ngokwenhlalo nakwezomnotho futhi kuyagqama ezinganeni ngenxa yomphumela walesi sifo.
Ingosi beyiwumzamo omncane wokuthi kube nengxoxo yokudingida ubunzima bezinkinga ekwelekeleleni izingane zibhekane nokwesaba kwazo ngalesi sifo. Izinto ezinkulu ezigcizelelwe kule ngosi bezigxile ebunzimeni bokufunda, ububha, ubumqoka bezikhungo zokufundisa ingane njengomndeni, abazali nothisha nesidingo sokubheka ukuphepha kwezingane nangokwenhlalakahle yezomqondo.
‘Lokhu kusho ukuthi ulwazi olukhona ngesifo kufanele ludingidwe nezingane ngezindlela ezihambisana neminyaka yazo ukuze zikwazi ukuqonda igciwane kangcono. Lokhu kuyagqama njengoba kuvulwa izikole. Ukuqhelelana nokungabi khona kolwazi kuzodala ukwesaba… ukutheleleka, igciwane nokucwasa. Kufanele sifise ukwazi ukuthi zithini izingane ngokwesaba kwazo ukuze zikwazi ukuphendula ngendlela efanele,’ kusho u-Bhana.
Enkulumweni yakhe, uHlalele ubheke ‘ukushintsha kwezindawo zokufunda’ naloko okulindelwe yizingane ukuze zikwazi ukubhekana ‘nendlela entsha’ ngosizo oluncane. ‘I-COVID-19 ilethe ukuphazamiseka ezindaweni zokufunda nasendleleni izingane eziyijwayele. Izingane kulindeleke ukuthi zijwayele ikhaya njengendawo yokufunda, abazali/abafowabo nodadewabo/abazigadayo bathathe indawo yothisha bazo bese zijwayeleka izindlela ezintsha zokufunda, okukhona ukufunda ngobuchwepheshe kuzona. Lokhu kuphazamiseka kudinga amakhaya abe yizindawo zokufunda ezikahle,’ kusho uHlalele.
U-Pillay ugxile ekukhathazekeni, ekwesabeni nasengcindezini etholwa yizingane ngenxa yesifo, wagcizelela ukuthi kubhekwe indaba yesimo sezingane sengqondo ngezikhathi ezehlukene zokukhula nolwazi oluhambisana neminyaka yazo ukunciphisa izinselelo zesifo empilweni yazo.
‘Esikwaziyo ukuthi i-COVID-19 iyitshintshe kakhulu impilo yabo bonke abantu kanti nezingane ziyabalwa lapha,’ kusho u-Pillay, ophinde wagcizelela ukuthi zibonakala kanjani izinto ezikhathaza izingane nokuthi izingane ziduduzwa kanjani zilalelwe kanjani, wase enza izibonelo ezizwakalayo zokuthi kungenziwani ukududuza izingane.
U-Tomaselli ugxile ekusizeni izingane zifunde ngokuxoxa izindaba ngemifanekiso ehambisana nobuchwepheshe obusha. Uxoxe ngopopayi abenziwe yilabo okusetshenziswana nabo bakwamazwe aphesheya ababizwa ngokuthi Don’t Panic, bonke abazali kufanele babenabo njengoba bechaza ngendlela elula indaba yesifo, isidingo somvalelwandlini nokuthi kubhekwana kanjani nawo, nolunye ulwazi olujwayelekile ngegciwane.
Iphaneli igcizelele amasu e-2020 United National ukufundisa, ukweseka nokwenza lokho okungaphucula futhi kushintshe indlela izingane ezicabanga ngayo. Lesi sifo siletha amathuba kithina sonke ukuqinisekisa ukuthi amalungelo ezingane avikelekile nokuphepha kwazo.
‘Sonke sinomsebenzi wokubhekana nokwesaba kwezingane kanti lokhu kudinga indlela edidiyele ekhumbuza izingane ukuthi zinamalungelo, kungakhathalekile iminyaka yazo, ukuthi zingabantu abacabangayo nabanemizwa. Abantu abadala, abazali, othisha nemiphakathi bamqoka ukwenzeni lo msebenzi,’ kusho u-Bhana.